युट्युव च्यानलमा दिएको अन्तरवार्ताका कारण पाइलट विजय लामालाई पर्यो यस्तो समस्या, अब उनले जहाज उडाउन पाउलान ? – Etajakhabar
युट्युव च्यानलमा दिएको अन्तरवार्ताका कारण पाइलट विजय लामालाई पर्यो यस्तो समस्या, अब उनले जहाज उडाउन पाउलान ?
चर्चीत पाइलट विजय लामा एउटा अनलाईन टिभीमा दिएको अन्तरवार्ताका कारण विवादित भएका छन् । उनले सो अनलाईन टिभीमा बोलेका अभिब्यक्तिका कारण उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ । उनले पाइलटलगायत उड्डययनकर्मीलाई नियमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चुनौती दिंदै अन्तरवार्ता दिएका थिए ।
उनले प्राधिकरणलाई आफ्नो इजाजतपत्र खारेज गर्न चुनौती दिंदै अन्तरवार्ता दिएका थिए । सो अन्तरवार्ता पछि नेपाल वायुसेवा निगमका क्याप्टेन लामालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उनलाई प्राधिकरणमातहत सिनामंगलमा रहेको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यार्डड विभागले गत बुधबार ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
चैत १९ गते राति भएको निगमको दुबई उडान रद्दबारे पाइलट लामाले दिएको अन्तरवार्ताका विषयमा स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको हो। उनले आफु तनाव, थकान, अस्वस्थ र अनिन्द्रामा रहेको बताएका थिए । एउटा पाइलट तनाव र थकानमा हुनु भनेको अति सम्बेदनशिल विषय मानिन्छ ।
विमान उडाउने मुख्य जिम्मेवारी रहने पाइलटले नै आफू तनावमा हुने गरेका लगायतका मानसिक र शारीरिक समस्याबारे बोलेपछि उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । विभागका वरिष्ठ उडान सञ्चालक निरीक्षक बिएम अमात्यले लामाको सो कुराको पुष्टि गरेका छन् । अमात्यले उनलाई जहाज उडाउन दिनु समेत खतरा रहेको बताएका छन् ।
यदी पाइलट नै मानसिक वा शारीरिक तनावमा रहेको सार्वजनिक गर्छ भने तत्काल कम्पनीले ग्राउन्डेड गरेर मेडिकल जाँच गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । लामा कार्यरत निगम व्यवस्थापनले तत्काल ग्राउन्डेड गर्दैन भने त्यो उडान सुरक्षामा झन् ठूलो लापरबाही हो। यता बबरमहलस्थित प्राधिकरणले लामाको पत्र पाइसकेपछि उनलाई मेडिकल चेक गराउने जनाएको छ।
उनका अनुसार, संसारभर लाइन पाइलटहरुको स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थालाई असर पर्ने भएकाले प्रवक्तालगायत अति संवेदनशील व्यवस्थापकीय भूमिकामा दोहोरो जिम्मेवारी दिने प्रचलन हुँदैन। निगममा ३२ वर्षदेखि कार्यरत लामा नवौं तहका वरिष्ठ क्याप्टेन हुन्। हाल उनी एयरबसको वाइडबडी उडानमा छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १०, २०७६ समय: २२:२५:३३